December 05 ~ विज्ञान संसार
Posted by Om Bhandari On 11:55 PM
हाम्रो शरीरलाई सधै हावा चाहिन्छ । यसका लागि हामी सास फेर्ने गर्छौ । हामीले खाएको खानालाई ऊर्जामा वा शक्तिमा परिवर्तन गर्नका लागि अक्सिजन चाहिन्छ । शरीरका लागि अनिवार्य रुपमा आवश्यक त्यो अक्सिजन हावामा पाइन्छ । त्यसैले हामीलाई हावा चाहिन्छ । हुन त पानीमा पनि अक्सिजन हुन्छ तर हाम्रो फोक्सोले पानीबाट अक्सिजन लिन सक्दैन । हाम्रो शरीरका अङ्गहरूको विकास नै त्यसरी भएको हुन्छ । पानीमा बस्ने जीवको शरीरमा पानीबाट अक्सिजन लिनसक्ने गरी विशेष किसिमको अङ्ग विकास भएको हुन्छ । जसलाई गिल्स भनिन्छ । मानिसलगायत जमिनमा बस्ने अरु प्राणीहरूको शरीरमा त्यस्ता अङ्ग हुदैनन् । त्यसको सट्टामा हाम्रो शरीरमा फोक्सो हुन्छ । फोक्सोले पानीमा घुलिएको हैन , हावामा घुलिएको अक्सिजन मात्रै लिन सक्छ । त्यसैले बाच्नका लागि अति आवश्यक अक्सिजन लिनका लागि हामीलाई हावा नै चाहिन्छ ।
हाम्रो शरीरका कोषहरूले हावाबाट अक्सिजन लिई हामीले खाएको खानेकुरालाई ऊर्जामा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्छ । यो प्रक्रियाबाट कोषहरूले कार्बनडाइअक्साइड निर्माण गर्छन् । कार्बन डाइअक्साइड हाम्रो शरीरलाई चाहिदैन । त्यसैले सास फेर्दा हामी त्यो कार्बनडाइअक्साइड पनि बाहिर फाल्ने गर्छौं । हरेक दिन हाम्रो शरीरले करिब छ सय क्वार्ट अक्सिजन लिने गर्छ । त्यसबाट करिब पाच सय क्वार्ट कार्बनडाइअक्साइड निर्माण हुन्छ । हावाको १/५ भाग अक्सिजन हुन्छ । त्यसैले एक दिनमा तीन हजार क्वार्ट हावा हामी लिने गर्छौं । अचम्मको कुरा के छ भने हामीलाई तीन हजार क्वार्ट हावा मात्र भरिएको कोठामा थुनियो भने हामी बाँच्न सक्दैनौ । यस्तो हुनुको कारण त्यो कोठामा हाम्रो शरीरबाट निस्केको कार्बनडाइअक्साइडले गर्दा हावाको अक्सिजनको अनुपात निकै कम हुनपुग्छ । त्यस स्थितिमा हाम्रो फोक्सोले चाहिने मात्रामा अक्सिजन लिन सक्दैन । फलतः शरीरमा ऊर्जा निर्माणको प्रक्रिया पनि ठप्प हुन पुग्छ । खुला ठाउँमा भने त्यस्तो हुन पाउदैन किनभने हामीले सास फेर्दा ˆयालेको कार्बन डाइअक्साइडलाई हरिया वनस्पति विरुवाहरूले ग्रहण गरिरहेका हुन्छन् र त्यही अनुपातमा नै अक्सिजनको निर्माण गरिरहेका हुन्छन् । फलतः संसारमा अक्सिजन रित्तिन पाउदैन ।
Posted by Om Bhandari On 6:35 AM
शोधकर्ताहरुले मोबाइल फोनको अधिक प्रयोगबाट पुरुषको शुक्राणुको संख्या घट्नसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनीहरुले यसो हुदा प्रजनन क्षमतामा प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन् । भारतको मुम्बइ अस्पतालमा सन्तान जन्माउन असफल भएकामध्ये उपचार गराइरहेका 364 पुरुषहरुमाथि गरीएको अध्ययनबाट यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
शोधकर्ताका अनुसार एक दिनमा चारघण्टा वा त्यसभन्दा बढी समयसम्म मोबाइलको प्रयोग गर्ने पुरूषको शुक्राणुको संख्या कम पाइएको छ । रहेका शुक्राणुको अवस्था पनि ठीक पइएको थिएन ।
त्यस्ता व्यक्तिको शुक्राणु संख्या प्रतिमिलिलिटर पाँच करोड पाइएको थियो । जुन सामान्य व्यक्तिको भन्दा निकै कम हो । शोधले 2-4 घण्टासम्म मोबइल फोन प्रयोग गर्ने व्यक्तिको शुक्राणु प्रतिमिलिलिटर सात करोड पाइएको देखाएको छ । मोबाइल फोन प्रयोग नगर्ने व्यक्तिमा यो संख्या साढे आठ करोड पाइएको छ । तर्सथ मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने पुरुषहरु सावधान रहौं है ।
मोवाइल फोनले वातावरणलाई हानी गर्छ ?
Posted by Om Bhandari On 5:45 AM
सामान्यतः जन्मिने बेलामा शिशुको शरीरको लम्बाइ 50 सेन्टिमिटर हुन्छ । त्यसपछि 20 वर्षमा उसको उचाइ3गुनासम्म बढेर औसत 1.7 मिटर पुग्न जान्छ । तर त्यसपछि भने उचाइमा खासै परिवर्तन आउँदैन । हाम्रो उचाइ सधैं किन बढिरहँदैन ? हाम्रो उचाइ बढ्न कुन तत्वले रोक्छ ?
हाम्रो शरीरमा ग्रन्थीहरूको एउटा प्रणाली हुन्छ, जसलाई इन्डोक्राइन ग्रन्थीहरू भनिन्छ । यी ग्रन्थीहरूले हाम्रो शरीरको उचाइको नियन्त्रण गर्ने काम गर्दछ । इन्डोक्राइन ग्रन्थीहरूमा थाइरोइड ग्रन्थी, पिट्युटरी ग्रन्थी, थाइमस ग्रन्थी, र लैंगिक ग्रन्थीहरू पर्दछन । पिट्युटरी ग्रन्थीले हाम्रा हाडहरूको आकारको नियन्तरण गर्दछ । यदि यो ग्रन्थी धेरै सक्रिय भएमा हाम्रा हात तथा खुट्टाहरू निकै लामा-लामा हुन्छन् । तर यसले राम्ररी काम गरेन भने पुड्को भइन्छ ।
शिशु जन्मँदा उसको थाइमस ग्रन्थी ठूलो हुन्छ र यो ग्रन्थीको आकार बाल्यकालमा बढ्दै जान्छ । तर किशोरावस्थामा यसको आकार सानो हुन थाल्छ । थाइमस ग्रन्थी र लैँगिक ग्रन्थीहरूमा एक प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ । जबसम्म थाइमस ग्रन्थीले काम गरिरहेको हुन्छ तबसम्म लैँगिक ग्रन्थीहरू स-साना हुन्छन् । लैँगिक ग्रन्थीहरूले काम गर्न थालेपछि थाइमस ग्रन्थीले काम गर्न छाड्छ । जसको फलस्वरूप लैँगिक रूपमा वयस्क भइसकेपछि 20/22 वर्षको उमेरमा मानिसको शरीर बढ्न रोकिन्छ । कहिलेकाहीं लैंगिक ग्रन्थीहरूको चाँडो विकासको कारण थाइमस ग्रन्थी चाँडै निष्क्रिय हुन जान्छ , जसको कारण शरीरको उचाइ सामान्यभन्दा कम हुन जान्छ । लैँगिक ग्रन्थीहरू ढिलो विकास भएको खण्डमा मानिसको उचाइ सामान्यभन्दा बढी हुन जान्छ । सत्य त के हो भने हाम्रो उचाइ 25 वर्षको उमेरपछि पनि 35/40 वर्षसम्म बढिरहन्छ , तर निकै थोरै गतिमा मात्रै । त्यसपछि भने प्रत्यक 10 वर्षमा करिब 12 मिलिमिटरको दरमा उचाइ घट्छ । यसको कारण भने हड्डीका जोर्नीहरू तथा मेरूदण्डमा हुने कुर्कुरे हड्डी सड्नु हो ।